Indlu entle yamaKoloniyali w Pool kwiZiko
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguErick
IVilla 'Casa Blanca' enePool ebekwe nje iibhloko ezi-2 ukusuka kwisitalato esikhulu saseLa Calzada, esineendawo zokutyela kunye nobomi basebusuku. I-Colonial idibana nale mihla, uya kukuthanda ukuhlala kule ndawo yokuphumla ngenxa yendawo yokuhlala evulekileyo kunye nekhitshi evulekileyo, ichibi elihlaziyayo kunye namagumbi amabini okulala oMoya anegumbi lokuhlambela laBucala. Zombini indawo yokuphumla kunye negumbi lokulala zineeTV zeNetflix. Ukulala ubukhulu be-10.
Nje ukuba ufikile kule villa isanda kulungiswa, ebizwa ngokuba yiCasablanca, ungena kwindawo yokuphumla. Ekuseni ungakhetha ukutya kwasekuseni phakathi kwe-7 kunye ne-12 pm ngentlawulo encinci eyongezelelweyo ($ 5p.p). Isidlo sakusasa ngekofu, iti, iijusi ezintsha, iziqhamo eziphilayo, isonka, iavokhado kunye namaqanda ngokukhetha kwakho. Ukuba uneminqweno ekhethekileyo usazise.
Yonke into yenziwe ukuze uzive ukwi-oasis yokuphumla kunye nokonwaba. ICasablanca imi kumbindi wembali weGranada, eyona dolophu yakudala yelizwekazi laseMelika.
Ngombono weMombacho Volcano kwaye kufutshane neplaza ephambili kweyona dolophu yakudala yelizwekazi laseMelika ishiya nabani na imvakalelo ekhethekileyo. Imbali yayo ekungqongileyo, ibali labafuduki bokuqala beza kule dolophu ikude.
Singakunika ukhenketho lwe-tailer kwizinto ezinomtsalane ezikufutshane nedolophu. Ezi ziquka uhambo oluya eLaguna de Apoyo (iCrater Lake Lagoon), iVolcano Masaya, iVolcano Mombacho kunye nokuhamba ngesikhephe kwi-Isletas yaseGranada (Islets of Granada). Ngovuyo sinikezela ngalo naluphi na uncedo kunye nezindululo kukhenkethi lwalapha ekhaya okanye ukhethe iintsuku zethu zokuhlola ezikhethekileyo!
IGranada ngokwayo lilitye elinqabileyo. Relax kwisikwere esikhulu, hambahamba kwaye emva koko ukhwele isikhephe, wenze ukhenketho lwekofu kwiinduli zaseMombacho, iCanopy adventure kunye nezinye izinto ezininzi.
Iiteksi yindlela efikelelekayo yothutho phakathi kwezixeko ezikhulu. Edolophini uhamba naphi na ngeteksi ngee-cordobas ezili-15, ngaphantsi kwesiqingatha sedola umntu.
Kabini ngeveki inkonzo yesikhephe ngokuthe ngqo idibanisa iGranada kunye nesiqithi saseOmetepe. Kukho iibhasi zemihla ngemihla eziya kumazwe angabamelwane nakwiidolophu ezinkulu zaseNicaragua. Kukho iinqwelomoya zemihla ngemihla eziya eLiberia naseCorn Island ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseManagua.
Ukufika eCasablanca kufuneka kukwenze uzive usekhaya. Akukho maxhala, akukho nto yokulungiselela, uze ukuphumla.
Wamkelekile eCasablanca eGranada, eNicaragua Eyona dolophu iNdala yaseMelika kwilizwekazi eliqinileyo.
Thina, u-Erik no-Bertha, siyakwamkela ngokufudumeleyo. Iibhloko zethu ezintathu ukusuka kwiCentral Square kunye neebhloko ezimbini ukusuka eCalzada. .
1. Ifowuni: URosa (inkosikazi ethandekayo yendlu); +505 77872824
UManuel (umqhubi wethu); +505 83879218. Okanye uqhagamshelane nathi ngokuthe ngqo ngencoko ka-Airbnb.
2. Uncedo: Abasebenzi bendlu bakwinkonzo yakho ngexesha lokuhlala kwakho ukuze bakunike ulwazi kunye noncedo. Siyayixabisa kakhulu imibono yokuphucula inkonzo.
3. Isidlo sakusasa: sinikezela ngentlawulo eyongezelelweyo ($5) isidlo sakusasa.
4. Ukhuseleko: INicaragua ithathwa njengelona lizwe likhuselekileyo kuMbindi Merika. Njengayo yonke indawo kufuneka uyithathele ingqalelo into yokuba eli lizwe lihlwempuzekileyo, apho abantu babona ubusela okanye ubuqhophololo ngendlela enokwenzeka yokuphuma. Ukuthwala iikhamera zexabiso eliphezulu, izipaji, ukushiya izinto ezixabisekileyo kwiimoto ezingajongwanga kunika ithuba elingeyomfuneko kumasela. Nceda uthathe emva kweeteksi ezimnyama (i-20 cordoba yintlawulo yangokuhlwa/yobusuku ngomntu ngamnye) ukusuka kwindawo yakho yentselo okanye kwindawo yokutyela ukuya ekhaya. Uhlala ucetyiswa ukuba usebenzise iiteksi eziphantsi njengendlela ekhuselekileyo yokuhamba. Ungaze uhambe emva kobumnyama ecaleni konxweme lwechibi.. Thatha iteksi rhoqo.
5. Ukucocwa kweGumbi: Umama wendlu uya kutshintsha iitawuli zakho mihla le xa ucelile. Ilinen yelinen kunye neetawuli zifakwe kwixabiso lerenti yemihla ngemihla yegumbi okanye indlu.
6. Ezothutho: Ukuba ufuna nayiphi na into yokuhamba sazise.
7 Ukusetyenziswa koMbane: Xa uphuma kwigumbi, nceda uvale ucango uze ucime zonke izixhobo zombane.
8. I-ATM: Unokufumana imali kwii-ATM ezininzi kwiibhanki ezifana ne-BAC ne-Banpro. UBancentro wamkela kuphela iiVisacards koomatshini beATM.
9. Iindawo zokutyela ezicetyiswayo: Sicebisa iGarden Café kwisidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa. I-Bocadillos (i-Tapas yamazwe ngamazwe), i-PitaPita (ukutya kwe-Italian kunye ne-Middle East), i-Mona Lisa (ukutya kwe-Italian). Fumana iingcebiso ezingakumbi kwincwadi yokhenketho.
UBomi bobusuku obucetyisiweyo: Kubomi basebusuku sicebisa kakhulu i-Encuentros, eyona Klabhu yaseGranada enebhari yophahla kunye nedama lokuqubha.
10. Akutshaywa emagumbini nceda.
11. Umonakalo: Undwendwe olubangele umonakalo kwimpahla yendlu ngabom okanye ngengozi kuya kufuneka luwubuyisele wonke loo monakalo.
4.82 ·Izimvo eziyi-273
4.82 · Izimvo eziyi-273
Umbuki zindwendwe ngu- Erick
Nantoni na oyifunayo nceda uqhagamshelane nam!